Stephanie de leng milaza
Aprily 12, 2014 amin'ny 11:49 aho
1 tsy miasa ho ahy. Tafahitsoka teo aho 9.5 ary tsy misy saina.
Raha mamafa ny plug ao tahaka ny ao amin'ny 2 no very ny fomba amam-panao fandikan-teny?
Tsy hahatakatra ny fomba hanoloana ny antontan-taratasy momba ny lohamilina. Please manazava
Aprily 13, 2014 amin'ny 11:30 aho
1. Jereo raha ny fampiatranoana mpanome no fanakànana ny fidirana noho ny antony, fa amin'ny ankapobeny izany miasa
2. Raha ianao mamafa ny plugin tsy tokony ho very na inona na inona fandikan-teny, toy ny efa voatahiry ao an WordPress banky angona,
3. Fanoloana ny antontan-taratasy eo amin'ny lohamilina azo atao amin'ny alalan'ny sftp, na misy fomba hafa ny fampiantranoana mpanome no nanome anareo, manazava izany valiny izany ivelan'ny sehatra
Aprily 15, 2014 amin'ny 8:29 aho
Nahoana no tsy tafiditra fotsiny ao amin'ny lehibe transposh repo fa tsy adala izany dingana rehetra-ny-hametraka crap everytime WordPress vaovao pirinty Navoaka?
Aprily 15, 2014 amin'ny 10:40 am
Vakio ny lahatsoratra lohateny veloma wordpress.org, ny “adala” dingana tsy misy ny vaovao rehetra WordPress dikan-, fa tonga izany, raha tsy maintsy mifidy ny haka azy tanteraka avy repository lehibe noho ny zava-niseho iny,
Mey 6, 2014 amin'ny 8:58 aho
Satria 0.9.4 aho manana olana miaraka amin'ny fahana RSS. Uppercases amin'ny marika XML Esorina. Avy eo aho dia tsy manan-kery fahana intsony ao amin'ny W3 validator.
Fa ny tenifototra lastBuildDate Ohatra lasa lastbuilddate. Raha vao mankarary ny plugin rehetra dia niverina ho “ara-dalàna”
Fisaorana lehibe indray izany asa mahatalanjona nataonao (ary hanao) amin'ny izany plugin !
Mey 14, 2014 amin'ny 12:22 am
Raha misy olona iray manana olana mitovy, Nampiasa ny tendron'ny aho ao amin'ny tapakila #220 izay foana izany / Feed / fampirimana mba ho scanned amin'ny transposh. I found back my uppercases 😉
Jona 16, 2014 amin'ny 10:00 aho
Tsy mety mahita ny safidy “mamela ny fanavaozam-baovao ho an'ny feno dikan-”, aiza izany?
Jona 19, 2014 amin'ny 10:09 aho
Raha mampiasa ny dikan-alaina avy wordpress.org, dia teo an-tampon'ny ny toe-javatra pejy, Raha mampiasa ny dikan-feno, izany dia tsy hiseho.